Izindaba - Umehluko phakathi kwejezi nejezi
Ngokusobala ijezi uhlobo lwejezi eboshwe. I-Knitwear ingumqondo obanzi. Izembatho ezingalukiwe zingahlukaniswa ngezingubo zekotini nezembatho zoboya, futhi amajezi angaphansi kwezembatho zoboya. Amaswidi athunjiwe esijwayele ukubhekisa kuwo ngokuvamile abhekisa ezindwangu ezilukiwe ezilukiwe ngemishini yokuluka. Ubuso buyintaba noboya obelukiwe impela ngezindlela zokucubungula azifani, amajezi athungiwe kukotini ekukhiqizeni ubuchwepheshe bokusika nokuthunga. Ijezi eliboshwe ngoboya alikwenzi. Indwangu iboshwe nge-disc yokuthunga. Amajezi esivame ukukhuluma ngawo ikakhulukazi izingubo ezelukwe ngentambo yoboya, futhi amajezi alukiwe angumqondo wobungcweti kakhulu. Ngokuvamile, izingubo zangaphansi, ezemidlalo zikakotini, amasokisi, njll kungathathwa njengokuluka.
I-Knitwear ivame ukunotha ku-drape nomphumela womzimba. Eminyakeni yamuva nje, inhlanganisela ye-cardigan ehlanganisiwe ethandwayo ilingana kakhulu namantombazane amancane. Khetha ijezi elinemibala eqinile elinengubo emfushane nama-leggings anombala kamaskandi ngamabhuthi kaMartin. Ingubo enhle kakhulu, isiketi sengubo akufanele sibe side kakhulu. Esimweni sezulu esibandayo, futhi kuyisinqumo esihle ukukhetha ibhuthi leqhwa eligobile. Le nhlanganisela iyimfashini, iyintsha, inhle futhi inhle.
Umuzwa oxegayo nongakahleleki wamajezi athungiwe, njengengubo, ungakhombisa kahle isitayela saseYurophu nesaseMelika. Uma ugqoka phezulu okulingana kahle, okulingana nama-denim shorts kuzokwengeza ukushesha okuthile. Amasokisi amdaka nejakethi elukiwe nesiketi kukwenza ubukeke umuhle futhi ugcwele intelezi. Umphumela osondelene wezingubo zokuluka ungenza amabele nezinqe zakho zibukeke zigcwele, kuyilapho amasokisi amnyama enweba nje futhi anciphise imigqa yemilenze yakho. Ubuhle besifazane buvezwe kakhulu. Uma ugqoka ijazi elisikiwe, awukufanelekeli kakhulu ukuthola i-snood esindayo. Manje isikhafu esincane isikwele siboshelwe entanyeni, okuyimfashini nokuphana.